FAQs - JIANGSU RICHENG MEDICAL CO., LTD
Caawinaad ubaahantahay Fadlan hubso inaad nala soo xiriirto!
S: Alaabadaadu ma keeni karaan LOGO martida?
A: La Sameeyay
S: Maxay yihiin tilmaamayaasha farsamo ee badeecadaada?
A: Nidaamka tayada qalabka caafimaadka
S: Waa maxay farqiyada u dhexeeya badeecadaada isla warshadaha?
A: Xaqiijinta tayada, hubinta sheyga
S: Shirkaddaada miyaa kaa qaadaa khidmadaha caaryada? Immisa?
A: Marka tirada kaliya ay weynaato, waxaad kala xaajoon kartaa macmiilka sidii aad u yarayn lahayd ama u soo celin lahayd lacagta caaryada, inta badan adoo ku dallacaya khidmadda is-beddelidda caaryada.
S: Shahaadooyin noocee ah ayey shirkaddaadu gudbisay?
S: Shahaadada ISO13485 + CE, RoHS iyo helitaanka shahaadada
S: Waa maxay lahaanshaha iyo xuquuqda hantida aqooneed ee sheygaagu haysto?
A: 15 rukhsadaha moodooyinka curinta taranka
S: Muddo intee le'eg ayay isticmaalka caadiga ah ee caaryadaadu? Sidee loo ilaaliyaa maalin kasta? Waa maxay awooda wax soo saarka ee caaryada kasta?
A: Nolosha adeegga ee caaryada waxaa loo qaybiyaa tirada wakhtiyada waxqabadka, guud ahaan 100000 jeer. Caaryada waxaa lagu keydiyaa heerkulka qolka, oo saliid lagu shubo oo boodh laga xajisto. Awooda waxsoosaarka ayaa isbedeleysa iyadoo la eegayo cabirka caaryada si loo hubiyo heerka ugu sareeya ee soosaarka naqshadeynta isla xaaladahaas.
S: Alaabadaadu ma leedahay MOQ? Hadday haa tahay, waa maxay tirada ugu yar ee amarrada?
A: Xaddiga amar ugu yar, oo ay ku xiran tahay soosaarka wareega
S: Qalab tijaabooyin noocee ah ayay shirkadaadu haysataa?
A: Caliper, projector, miiska bidxiga, mitirka futada, iwm
S: Alaabadaada ma la raadraaci karaa? Hadday haa tahay, sidee loo fuliyaa?
A: Dufcado kasta oo alaab ah waxay leedahay lambar nooc soosaar ah oo gaar ah, kaas oo dib loogala socon karo nambar guuto soosaar ah.
S: Waa maxay wax soo saarka shirkaddaada? Sidee lagu gaaraa?
A: 98%, iyada oo loo marayo qaabeynta wax soo saarka, xakamaynta tayada adag, iyo tababarka xirfadda ee saxda ah.
S: Waa maxay wareegga nolosha ee alaabtaadu?
A: Alaabooyinka caafimaad guud ahaan waa waxyaabaha la isticmaali karo, laakiin waqtiga xajinta ee jirka ayaa ka dheer PVC. Kateetarka loo yaqaan 'silicone foley catheter' waxaa lagu hayn karaa jirka muddo 28 maalmood ah.